apytz radio ​အ​တွက်​ပါ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
apytz radio ​အ​တွက်​ပါ
​ဇေ​ယျာ​ဖြိုး: ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ ​ညီ​လေး ​အ​ဖြူ​ရောင်​သံ​စဉ်​ရေ​ဒီ​ယို code ​လေး​လို​ချင်​လို့
​ကဲ​ညီ​လေး​ရေ ​အစ်​ကို ​ညီ​လေး​ကို ​မေးလ်​က​နေ​တော့ ​မ​ပို့​လိုက်​တော့​ပါ​ဘူး .. ​နောက်​လူ​များ​လဲ ​သိ​ချင်​နေ​ရင် ​တစ်​ခါ​ထပ်​ဖြေ​ပေး​နေ​ရ​မှာ​စိုး​တာ​နဲ့ ​ပို့စ်​အ​ဖြစ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .. ​အစ်​ကို​ဖိုင်​လေး​နဲ့​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ဖိုင်​ကို​ဖြေ​လိုက်​တာ​နဲ​ပ Notepad ​နဲ့​ရေး​ထား​တဲ့ ​ကုတ်​တွေ​ကို ​ညီ​လေး​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​ကုတ်​တွေ​ကို​ယူ​ပြီး ​ထည့်​လိုက်​ပါ ... ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့ link ​က​သာ​ယူ​လိုက်​ပါ ...
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download megaupload ၊ Download rapidshare
saikawnnaw October 15, 2009 at 11:00 PM
multiply ​မှာ​ထည့် ​ကြည့် ​တာ​မ​ရ​ဘူး
​ဘ​လောဂ်​မှာ mp3 player ​ထည့်​နည်း
photoshopcs2: Password ​မှား​တာ​လား​မ​သိ​ဘူး.. ​ဒီ...
.vcr format ​အ​တွက်
yahoo messenger ​ချက်​နေ​စဉ် ip address ​ကို ​ဘယ်​...